Samachar Batika || News from Nepal » पैसा कमाउने केही टिप्सः जसले तपाईं रातारात बन्नुहुनेछ धनी !
१, महत्वकांक्षी बन्नुहोस र सपना देख्नुहोस्
२,क्षमताको पहिचान गर्नुहोस्
३,कडा परिश्रम गर्नुहोस्
४,कुनै काम सुरु गर्नुहोस्
तपाईं चुप लागेर बस्नु भयो भने पैसा कमाउन सक्नुहुन्न । त्यसैले तपाईंले कुनैपनि कामको जो’खिम मोल्नै पर्छ । त्यसैले काम सुरु गर्नुहोस् र त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् ।
अर्काको देखासिकी गरेर पैसा खर्च नगर्नुस् । पैसा उडाउने खालका साथी छन् भने तिनीहरूको संगत छोडिदिनुस् । तपाईंको पैसामा अरूलाई किन मोज गराउनुहुन्छ ? पैसा बचाउनु पनि पैसा कमाउनु नै हो ।
घरमा भएका पुराना सामान बेचिदिनुस् । घर भरिने गरी सामान थुपार्नुको के अर्थ ? सामान बेच्दा पैसा पनि हुने, घर पनि सुन्दर देखिने । कमाइभन्दा कम ख’र्च गर्नुस् । आमदानी अठन्नी, खर्चा रुपैयाँ गरेर काम छैन । क्रे’डिट कार्डको लत जति छिटो छुट्यो, त्यति राम्रो ।
त्यसैले हरेकले पैसा कमाउने जुक्ति खोजिरहका हुन्छन् । यहाँ हामीले केही तथ्य उल्लेख गरेका छौं । जुन फलो गर्नु भयो भने पैसा कमाउन सहज हुनेछ । जुन कमाउने तरिका माथी जानकारी दिएका छौ
प्रकाशित मिति २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:३१